Sidee ayuu Covid-19 u saameeyay howlgalka AMISOM & badalka…
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya waxaa shukaanta u haya dowlado kala duwan oo soo diray Ciidamada joogo dalka si ay qayb uga qaataan xasiloonida, dib u dhiska Ciidamada iyo awood ugu dhiibista si tartiib tartiib ah.
Wareysi uu bixiyay Taliyaha qaybta 1-aad ee Ciidamada Uganda Brig. Gen. Richard Otto waxa uu uga hadlay saameynta taban uu hwolgalkooda ku yeeshay cudurka Covid-19, maadaama badal ay ku sameeyaan Askarta, xiliyada qaar kordhiyaan iyo adeegsiga isu gudubkooda.
Taliyaha ayaa sheegay in qorshaha dhimista Ciidamada xitaa uu saameyn ku reebay cudurka, sabab la xiriirta feejignaanta dalalka ay ka muujinayaan faafitaanka Cudurka dilaaga ah ee Coronavirus.
Horraantii sanadkan, AMISOM waxa ay ahayd in ay yareyso tirada ciidamadeeda joogta Soomaaliya oo laga qaadayo ilaa 1000-Askari oo Militari ah lagana kala bixinayo qaybaha talisyada AMISOM si loo dhaqangeliyo qorshaha lagu dhimayo.
Sanadkii 2017-kii ayaa la go’aamiyay in sanad waliba si tartiib-tartiib ah loo dhimo Askarta AMISOM iyada oo aan culeys gaar ah looga dhigeen Ciidamada kale eek u haraya Talisyada iyo xeryaha si aysan u wiiqmin awooddooda.
Uganda waxa ay mas’uul katirsan waaxda 1-aad ee Howlgalka AMISOM oo ah Gobollada Banaadir iyo Shabeelaha Hoose, waxaa ka saaray waajibaad aad u culus marka la eego baaxadda dhulka loo dhiibay ayuu yiri Taliyaha.
Brig. Gen. Richard Otto Taliyaha qaybta 1-aad ee Ciidamada Uganda ma uusan qarin culeyska Ciidan ee soo wajahay, gaabista howlgaladooda, walwalka Askarta iyo niyad-jabka laga muujinayo, balse dhammaan waxa uu dusha ka saaray Covid-19.
“Wadamada Caalamka ayaa xanniban, AMISOM taageero dibadda iyo gudaha ah ayay heshaa, Askarteena waan kala hadalnay in ay feejignaadaan Amni iyo Caafimaad ahaan, lagana taxadaro halista la kulanka Bulshada oo cudurku ku faafo, sidoo kale waa in aysan Askarta caajisin oo aysan niyad-jabin” ayuu yiri Gen Otto.
Taliyaha qaybta 1-aad ee Uganda waxa uu ku faanay in Askarta uu hoggaamiyaha u yahay ay ilaaliyaan sugidda ammaanka, xuquuqda Aadanaha, sidoo kale ay ku wanaagsan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab oo ay aqoon u leeyihiin.
“Waxaa socda dhammaan dhabbaha lagu gaarayo howlgalka, Gawaarida ayaa socda, xitaa kuwa shacabka ayaa isaga kala gudbaya Muqdisho iyo Shabeelaha Hoose, Askarta AMISOM ayaa isaga kala gudubta Muqdisho iyo Shabeelaha hoose, dib ayay ugu laabtaan, waxa ay tagaan meelaha aan saldhigyada ku leeyahay sida Janaale, Marka iyo Baraawe” ayuu sii raaciyay Taliyaha.
Waxaa la weydiiyay Gen. Otto howlgalkooda ka socda Magaalada Janale Gobolka Shabeelaha Hoose in uu saameyn ku yeshay dhaq-dhaqaaqa Al-Shabaab iyo qorshooyinkii weerarada ah ay sameyn jireen.
Taliyaha ayaa ku warceliyay “Markii aan qabsaday Janaale, waxa aynu helnay xarun muhiim ah, waxa aan burburinay Qaraxyo la diyaariyay, Wax waliba waxa ay hagaageen markii aan gacanta ku dhignay marin dhanka Wabiga ah oo ay isaga gudbayeen Al-Shabaab, Buundooyinka iyo marinada kala duwan oo ay isaga gudbaan ayaan saldhiganayay”.
Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay wada shaqeynta Ciidamada Qaranka Soomaaliya (SNA), sanadkii tagay ayuu sheegay in ay wadajir u qabsadeen deegaanno dhowr ah, halka Askarta oo kali ah ay tageen Deegaanno Buundooyin leh iyo meelo kale sida Sabiid-Caano, Bariire, Ceel Saliini, Awdheegle iyo Janaano oo gacanta Al-Shabaab ka baxday Bishii March 2020.
Brig. Gen. Richard Otto ayaa awoodda Al-Shabaab ee xiligaan ku tilmaamay “Al-Shabaab waxa ay dhumiyeen dhul baaxad weyn, waxa ay isku qariyaan dadka shacabka, waxa ay adeegsadaan Hoobiyaal ay kasoo dhex tuuraan rayidka”.
Gen. Otto ayaa sheegay in dhismaha iyo kordhinta awoodda iyo tayada Ciidamada Xukumadda Soomaaliya ay tahay furaha kaliya ee lagu furi karo Sanduuqa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waana marinta gunta looga daadagayo xoojinta ammaanka.
Wareysiga Taliyaha oo dheeraa waxa uu kusoo hadal qaaday qorshaha mustaqbalka Ciidamada AMISOM, Isaga oo rajeeyay in ay dib ugu laabtaan Ciidamada Soomaaliya joogo waqtiga dheer, si ay dib ula midoobaan ehelkooda oo ay hilow u qabaan.
Isha:- Hornobserver.com / Axadle